Tonga ny «karatra» orinasa vaovao! | Martech Zone
Alahady, Aogositra 10, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Rehefa namoaka momba ny fividianana sasany aho karatra vaovao, Nahazo vitsivitsy aho lehibe tolo-kevitra. Anisan'izany ny karatra fandraharahana vy ary a karatra fandraharahana mampiasa Wordle.
Nanapa-kevitra ny handeha amin'ny lalana mifanohitra tanteraka amin'ny ny karatra am-boalohany. Rehefa atolotry ny olona amiko ny karatra fandraharahany amin'izao andro izao dia tsy manana azy ireo intsony aho - mody any an-trano aho ary manampy azy ireo Plaxo ary LinkedIn ary avy eo atsipiko izy ireo - na inona na inona hatsaran'izy ireo. Izany dia nanentana ahy handeha amin'ny safidy vaovao:
Tamin'ny fampiasana fikarohana haingana dia nahita orinasa an-tserasera aho izay manonta pirinty Custom Post-It Note izay mitovy habe amin'ny karatra fandraharahana! Nanafatra antokon'izy ireo aho ary tonga tao anatin'ny tapa-bolana izy ireo. Nivoaka tonga lafatra ireo karatra, nifanaraka tanteraka tamin'ny fitaovana an-tserasera nampiasako hanovana azy ireo. Nisafidy endritsoratra mora vakiana aho ary noforoniko tamin'ny fiantsoana tao amin'ny URLn'ny tranokalako izy ireo. Izaho aza mamporisika ny olona hanao 'Circle' lohahevitra iray hahafahan'izy ireo mahatadidy ny antony nihaonantsika na ny antony niantsoana ahy!
Tena nila zavatra tsy manam-paharoa aho ary mino fa mifanaraka amin'ny volavolan-dalàna ireo. Inona ny hevitrao?
Tags: fanentananadepositphotossary tahiry tsy misy mpanjakavarotra sosialyfanjakana ara-tsosialysary stock
10 Aogositra 2008 à 12:51
Afaka milaza amiko ve ianao hoe taiza no nahazoanao ireo? Mila karatra vaovao ny tenako ary te hikaroka an'io safidy io. Mipetraka any Atlanta aho ary tsy hanana karatra mitovy, fa ny zavatra toa izao dia mety ho tena mahafinaritra. Faly ianao fa tia ilay hevitra narosoko tany am-boalohany.
10 Aogositra 2008 à 2:21
Nitady karatra vaovao ny tenako. Toa hevitra tsara izany. Afaka hanontany aho hoe avy amin'ny tranokala inona no nanafatra azy ireo?
10 Aogositra 2008 à 2:27
Tena tiako ny karatra! Nanana hevitra mitovy amin'izany koa aho vao haingana mba hanao faribolana eo ambany safidy. Tsy maintsy manaraka vaovao momba ny fomba fiasan'izy ireo ianao!
10 Aogositra 2008 à 3:16
Misaotra tamin'ny fiderana, nanafatra azy ireo tamin'ny iPrint.com aho.
Aug 11, 2008 amin'ny 7: 54 AM
Raha te hanala tanteraka ny karatra fandraharahana ianao dia tokony hanandrana http://mydropcard.com Fitaovana vaovao lehibe ahafahanao mampiasa SMS na seha-pifandraisana finday handefasana ny karatrao manokana amin'ny olona hitanao.
11 Aogositra 2008 à 7:05
Tiavo izy ireo. Ny karatra fandraharahana dia ny "karatra fandraharahana". Tokony hilaza ny vokatrao/serivisy izy ireo. Yellow OOhweee. Azo antoka fa miavaka ireo karatra ireo. Izany no atao hoe "marketing"
Aug 13, 2008 amin'ny 5: 08 AM
Ankehitriny dia endrika mahafinaritra izany.
Heveriko fa azonao ampiasaina amin'ny karatra fandraharahana tena izy izany ary hanatsara kokoa ny fampiasana ny andaniny roa. Amin'ny lafiny iray dia misy sarin'ny lohanao (mba ho tadidiny ny endrikao), ny antsipirian'ny mombamomba anao sy ny fanasana mba hahazoana [zavatra] maimaim-poana ao amin'ny tranokalanao, dia asio lisitra (faribolana) eo amin'ny ilany iray.
7 Novambra 2008 à 1:21
Doug… hevitra tsara izany! Tamin'ny fivorian'ny TechCom vao haingana dia nomeko ny mombamomba ahy ao ambadiky ny zava-pisotro izay ampiasain'ny Starbucks rehefa mitondra ny kapoakany manokana ny mpanjifa. Nangataka vitsivitsy tamin'izy ireo aho mba hanamarika ny zava-pisotroko manokana, saingy tamin'ny farany dia nampiasa azy ireo aho mba hifandraisana. Mety tsy maintsy mandeha amin'ny lalanao aho manaraka!
7 Novambra 2008 à 8:33
Misaotra Tony! Tena takatry ny vidiny.